Ubuntu inosiya iyo 32-bit chikuva | Linux Vakapindwa muropa
Kugoverwa kwakati wandei kuri kusiya kana kusiya iyo 32-bit chikuva, vachizvipira ivo chete kune iyo 64-bit chikuva uye vachipa imwe chete yekuisa mufananidzo. Iri runyorwa rwekugoverwa rwuri kukura uye nezuro Ubuntu nevakagadziri vayo vakasimbisa kuve veichi chinyorwa, ndiko kuti, Ubuntu inosiya 32-bit chikuva.
Iyi shanduko inozoonekwa mune inotevera yakagadzikana vhezheni yekuparadzira, ndiko kuti, Ubuntu 17.10, vhezheni ichaburitswa muna Gumiguru 19.
Ubuntu haichazove nemifananidzo mhenyu yeiyo 32-bit chikuva pamwe nekuisa mifananidzo. Asi mapakeji epuratifomu ye32-bit ichaenderera ichichengetwa, yekuisa kwekare kwepuratifomu iyi. Ramangwana Ubuntu budiriro harizovazve neayo 32-bit vhezheni.
Vashandisi vevhenekeri dzayo dzepamutemo vanokwanisa kuve neiyo 32-bit vhezheni. Iwo mavhenekeri epamutemo anozofanirwa kusarudza kuti oenderera neiyo 32-bit vhezheni kana zvinopesana, rega kuigadzira. Saka vazhinji vashandisi vevhenekeri vepamutemo havazokanganisike nesarudzo iyi kubva kuCanonical uye timu yeBuntu.
Ichokwadi ndechekuti sarudzo iyi inopindura kune mamiriro ezvinhu ari kuramba aripo mumashandisi emakomputa. Huwandu hwemakomputa anotsigira kana kushandisa 64-bit chikuva chakakura kwazvo, zvichiita kuti zvive zvisina zvazvinoreva kune vazhinji kugadzira mavhezheni emakomputa makumi matatu nemasere, sezvo kunyangwe makomputa kubva makore gumi apfuura anotsigira iyo 10-bit chikuva.
Ini pachangu, ndinofunga sarudzo yaUbuntu ndiyo chaiyo sezvo yechinyakare makumi matatu-bit michina kazhinji isingashande nemhando huru yeUbuntu. Pane kudaro, ne iwo mavhenekeri epamutemo saLubuntu, Xubuntu kana Ubuntu MATE, 32-bit makomputa anoshanda nemazvo uye pamwe ndiwo mafirita anochengeta iyo 32-bit vhezheni. Asi aya maonero uye zvirokwazvo kuti vashandisi vazhinji vanoona iyi sarudzo isiriyo Unofungei? Iwe unofunga kuti sarudzo yaUbuntu ndeyechokwadi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu inosiya iyo 32-bit chikuva
Zvinoita sezvakanaka kwandiri kubvira nhasi hazvigoneke kumisikidza Ubuntu hwazvino pamushini kubva makore anopfuura gumi apfuura, uchifanira kushandurira vhezheni dzekare dzeUbuntu kuitira kuti zvirinani zvibvumidze iwe kuisa uye tisingatauri kumhanya nesystem